Carlo Ancelotti ayaa ka tagay Everton kuna laabtay Real Madrid – https://adanlove.wordpress.com
Barnamijyo gear ah
Thiago Silva ruled out of Chelsea clashShocked out of Champions League finalLeague
Carlo Ancelotti ayaa ka tagay Everton kuna laabtay Real Madrid
Posted byAdan Hassan 2nd Jun 2021 2nd Jun 2021 Posted inBarnamijyo gear ah, Caalamka, ciyaaraha, wararka maanta
Carlo Ancelotti ayaa ka tagay kooxda Everton isaga oo noqday tababaraha kooxda Real Madrid markii 2-aad.
61 jirkaan reer Talyaani, oo labo sano maamulayay Real Madrid intii u dhaxeysay 2013 iyo 2015, ayaa ka tagay Everton ka dib 18 bilood oo uu tababare ka ahaa Goodison Park.
Wuxuu ku guuleystey Zinedine Zidane oo Real ka tirsan isla markaana heshiiskaas wuxuu ka tegayaa Everton oo raadineysa tababare lixaad oo joogto ah shan sano gudahood.
Ancelotti ayaa saxiixay heshiis seddex sano ah oo uu kula joogayo Real, waxaana uu sheegay in heshiiska uu u muuqday “fursad lama filaan ah”.
Wuxuu intaa ku daray: “Waxaan ixtiraam buuxa u hayaa qof kasta oo xiriir la leh Everton waxaana rajeynayaa inay ku guuleysan karaan fursadaha xiisaha leh ee ay ku heystaan ​​hortooda.
“Intii aan ku riyaaqay joogitaankeyga Everton waxaa la ii soo bandhigay fursad lama filaan ah oo aan aaminsanahay inay tahay tallaabada saxda ah ee aniga iyo qoyskeyga xilligan.”
Real ayaa Ancelotti u soo bandhigi doonta saxaafada Arbacada, halka Everton ay sheegtay inay “bilaabi doonaan howsha magacaabista tababare cusub isla markiiba”.
‘Run run ah’ – falanqayn
Everton waxaa layaab ku noqon doonta xawaaraha horumarka 24-kii saac ee la soo dhaafay iyadoo milkiilaha Farhad Moshiri “Hollywood” uu ka tagayo.
Imaatinka Ancelotti waxaa loo arkaa inuu ahaa afgambi dhab ah oo uu sameeyay Moshiri, isagoo ka dhaadhiciyay mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu qurxoon ciyaarta isla markaana la ixtiraamo inuu yimaado Merseyside si Everton loogu soo celiyo sharaftii hore.
61-sano jirkaan xukunkiisa wuxuu ahaa boorsooyin isku dhafan oo leh qaab cabsi leh oo gurigiisa lagu dheelitiray natiijooyin la mid ah guushoodii ugu horeysay ee Liverpool ay ku gaarto Anfield tan iyo 1999 – laakiin ugu danbeyntii kaalinta 10aad ee xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee buuxa ayaa niyad jab leh.
Si kastaba ha ahaatee, Ancelotti, ayaa wali qadarin weyn u haya taageerayaasha Everton, kuwaas oo si xun uga niyad jabay go’aanka uu ku tagay.
Xaqiiqda naxariis darrada ah ayaa ah in dhammaan lacagaha Moshiri iyo hamigooda, Everton aysan weli isku tixgelin karin inay u dhowdahay kuwa ugu caansan, taas oo had iyo jeer ka dhigeysa inay u nugul yihiin kooxaha sida Real Madrid oo indhaha ku haysa hantidooda abaalmarinta.
Tuhmanayaasha caadiga ah ayaa lala xiriirinayaa, sida Eddie Howe ka dib markii uu diiday Celtic, tababarihii hore ee Wolves Nuno Espirito Santo iyo tababarihii hore ee Everton David Moyes – inkasta oo ay u badan tahay inaysan dhicin ka dib markii uu afkiisa ku ogolaaday heshiis seddex sano ah oo uu kula joogo West Ham ka dib iyaga oo geynaya Yurub. Moshiri, in kastoo, uu yahay wax duudduuban oo laga yaabo inuu haysto fikrado isaga u gaar ah.
‘Carlo Fantastico’ – ma ogeyd?
Maamulayaashii qabtay ugu yaraan 10 kulan oo Premier League ah oo ay la ciyaareen Everton, celcelis ahaan 1.53 dhibcood-kulan kasta oo ka hooseeya Carlo Ancelotti ayaa ka fiicnaaday tababarayaasha kale ee ka horreeyay. David Moyes ayaa fadhiya kaalinta labaad 1.5
Nin rogay dhibaatada Real
Ancelotti ayaa ku guuleystay 15 koob oo waa weyn intii uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed waana mid ka mid ah seddex tababare oo ku guuleystay seddex koob oo yurub ah – waxaana ku wehliya halyeeyga Liverpool Bob Paisley iyo tababarihii hore ee Real Zidane.
Tababaraha reer Talyaani wuxuu koobab gudaha ah la leeyahay AC Milan wadankiisa, Chelsea England, Paris St-Germain ee France iyo sidoo kale Jarmalka Jarmalka Bayern.
Isagoo horay labo jeer Champions League ula qaaday Milan, wuxuu Real Madrid ku hogaamiyay guushii 10aad ee koobkan sanadkii 2014 laakiin sanad ka dib ayuu ka tagay shaqada tababarenimo.
Real ayaa ku guuleysatay Champions League seddex jeer intii uu jiray Zidane laakiin waxa ay ku dhameysatay xilli ciyaareedkii 2020-21 koob la’aan, iyagoo ku dhameystay kaalinta labaad ee La Liga ka dib Atletico Madrid.
Shan sano oo isbedel ah Everton
Maareeyaha bidix Guul%
Carlo Ancelotti Juun 2020 43.1
Marco Silva Diisambar 2019 35.8
Sam Allardyce Meey 2018 37.5
Ronald Koeman Oktoobar 2017 40.4
Roberto Martinez Meey 2016 38.1
‘Waan ogahay in Rafa uu qaadan lahaa’
Daafacii hore ee Liverpool Jamie Carragher ayaa si dhaqso leh ugu sheegay tababarihiisii ​​hore Rafael Benitez – oo ku nool Merseyside – inuu yahay dooq iska cad shaqada Everton.
Khabiirka kubada cagta Isbaanishka Guillem Balague ayaa u sheegay BBC Radio 5 Live: “Miyuu Rafa Benitez qaban karaa shaqada Everton? Waan ogahay xaqiiqda inuu qaban doono.
“Real Madrid waxay sugeysay Mauricio Pochettino. Paris St-Germain waxay kicisay cusbooneysiin qandaraaskiisa. Marka dariiqa kaliya ee Pochettino uu ku aadi karo Real ama Spurs waa inuu si cad u dhaho waan tagayaa. Marka taasi waxay la micno aheyd Real inay aragto maxaa jira.
Waa koox heysata ciyaartoy uu Ancelotti ku lahaa waqtigiisii ​​halkaas. Florentino Perez ayaa go’aansaday inuu ceyriyo markii uu ku guuleystay Champions League, wuxuu dareemay in kooxda aysan si adag u shaqeyneynin.
Luka Modric iyo Sergio Ramos ayaa wax laga waydiiyay arinkaas waxayna yidhaahdeen ‘ilaali’. Waa la eryay, xidhiidhka uu la leeyahay Perez wuu sii xumaanayay waqti hore mana fiicnayn.
“Laakiin waxaan gaarnay daqiiqad ay Real Madrid u baahan tahay qof u keeni kara waji farxad leh xerada isla markaana ka faa’iideysan kara dhalinyaro iyo halyeeyo isku dhafan.”
Published by Adan Hassan
I am a	View more posts
Dib-u-eegista Xilliga Premier League 20/21